नयाँ उत्पाद, सेवा वा सुविधाहरू निर्णय गर्दै Martech Zone
नयाँ उत्पादहरू, सेवाहरू वा सुविधाहरू निर्णय गर्दै
यो हप्ता मैले पाए ट्यून इन बाट व्यावहारिक मार्केटिंग.
म अहिले पुस्तकको माध्यमबाट एक तिहाइ हुँ। त्यहाँ व्यापारिक हब्रिसले कसरी उनीहरूलाई खराब निर्णयहरूको मार्गमा डो .्यायो भनेर उदाहरणका धेरै उदाहरणहरू छन् किनकि उनीहरू आफ्ना सम्भावनाहरूलाई 'ट्युन इन' थिएनन्। तिनीहरूको सम्भावनाहरूलाई के चाहिन्छ भनेर पत्ता लगाएर कम्पनीहरूले उत्पादन, सेवा वा सुविधाहरू सुरू गर्दै थिए जुन स्निन्करहरू थिए।
सामाजिक मिडिया र वेबको आगमनको साथ, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ सन्तुलन छ जब तपाईं नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू, वा सुविधाहरू निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि यो सम्भावना भन्दा टाढा विस्तार हुन्छ। अब जब ग्राहक एक मजबूत मार्केटिंग माध्यम हो, तपाईंले उनीहरूलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। पुस्तकले यस पोष्टलाई प्रेरणा दियो।
यहाँ दृष्टिकोण जुन मैले नयाँ उत्पादनहरू, सेवाहरू वा सुविधाहरू जहाँ म कार्य गर्छु को प्राथमिकता निर्णय गर्न लिन्छु:
के टाँसिलो छ? अर्को शब्दहरुमा, म के विकास गर्दैछु जसले ग्राहक अवधारणलाई सुधार गर्ने छ? यदि तपाईं सास विक्रेता हुनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, के तपाईंसँग एपीआई छ? एपीआई शानदार छ किनकि तिनीहरूलाई कम कोड, कम समर्थनको आवश्यक पर्दछ, र तिनीहरूलाई तपाईंको उत्पादनको साथ एकीकृत गर्नको लागि तपाईंको ग्राहकले आन्तरिक लगानी आवश्यक गर्दछ।
सनसनीखेज के हो? केही उत्पादनहरू, सेवाहरू, वा सुविधाहरू तिनीहरूको भारको लागि लायक छन् किनकि उनीहरूले उद्योगमा पार्ने प्रभावको कारण। यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण रेस्टुरेन्टहरूको लागि मोबाइल अर्डरिंग हो। जबकि प्रमुख पिज्जा आउटलेटहरूले अझै पनि उनीहरूको बिक्रीको १०% मात्र प्राप्त गर्दछन्, अब उनीहरूले मोबाइलमा लगानी गरेका छन्।
लगानी सम्भवतः ब्यापार घाटा हुने छ किनभने प्रयोगकर्ताले फोन मार्फत अनुभव बेवास्ता गर्छ। जे होस्, तिनीहरू समाधान संग बजार दौड थियो ताकि तिनीहरूले hype प्राप्त गर्न सक्छन्। को सबैभन्दा नयाँ hype विजेट हो.
सिडेनोट: मलाई विश्वास छ कि मोबाइल अर्डरिंग र विजेटहरूको दिन हुनेछ - तर प्रविधिको सुधार हुने बित्तिकै पूर्ण रूपमा पुनर्विकास हुनेछ। यी व्यवसायहरूमा लगानी गरियो अब बज र अप्रत्यक्ष व्यापारको कारण - प्रत्यक्ष व्यवसाय परिणामहरू होइन।
के पीटीओ-योग्य? तपाइँका ग्राहकहरु मा र अफलाइन संगठित छन्। कर्मचारी उद्योगहरूमा लागिरहन्छन् तर बिभिन्न कम्पनीहरूमा सर्छन्। यसको मतलब यो छ कि वर्ड अफ माउथ मार्केटि important महत्त्वपूर्ण छ र तपाईंको व्यवसायले यसलाई एक अवसरको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईं उत्पादन, सेवा वा सुविधा सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन तपाईंको ग्राहकहरू केरामा जान्छन्, तपाईंलाई राम्रो लाग्छ कि उनीहरूले उद्योगका अन्य व्यक्तिहरूलाई यस बारेमा बताउँदै छन्!
के बिक्री योग्य छ? यो धेरै हदसम्म मैले यति सम्म पढेको पछाडि विचार हो ट्यून इन। यो तपाईंको व्यवसाय बढ्न मा सब भन्दा ठूलो कारक हो - तपाईंको उत्पादन, सेवा वा सुविधा एक व्यापार भर्नु पर्छ आवश्यक। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँको उत्पादन को खरीद द्वारा - मेरो व्यवसाय को लाभ लागत को पछाडि। यदि त्यहाँ कुनै आवश्यक छैन भने, तपाईं सायद सफल हुन लाग्नुहुन्न। एस्किमोसमा बरफ बेच्ने भनेको मिथक मात्र हो।
यी कुनै पनि कारकहरूले अर्कोलाई छोडिदिन सक्छन्। कहिलेकाँही, हामी धेरै ठूलो सम्भावनाको मागमा नयाँ सुविधाहरू विकास गर्दछौं। यो एउटा जुवा हो, तर हामीले स्वीकार गर्‍यौं कि यदि हामीले त्यस विशेष ग्राहकलाई नराख्यौं भने पनि लगानीको भुक्तानी हुनेछ। म विश्वास गर्दछु कि एक महान रोडम्यापमा यी चारैवटा पहलहरू हुनुपर्दछ।
टैग: B चरणहरू इनबाउन्ड मार्केटिंगमासामग्री अनुकूलनग्राहक समर्थनइन्फोग्राफिक्स डिजाइनभौगोलिक अनुकूलनभौगोलिक एसईओइनबाउन्ड मार्केटिंग प्रक्रियानेतृत्व पोषणस्थानीय अनुकूलनव्यावहारिक मार्केटिंग
यो कल टु एक्शन जाँच गर्नुहोस्!
वर्डप्रेस एक सीएमएस पावरहाउसमा विकसित